ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “၀ုတ်ပါ့မလား မောင်ကာဠုရဲ့”
၀ုတ်မှာပါ ကိုပေါရဲ့ (ဘာမှန်းတော့ မသိဘူး)
သတင်း မတိကျဘဲနဲ့ အစိုးရ က ဖေါ်ပြပါ့မလား။ မဟုတ်မမှန် သတင်း ဖေါ်ပြတာ ဒီမိုကစေီ လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဌာနတွေပါ၊ ဟိုတစ်လောကပဲ ဒေါ်စုကြည် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်ပြီး ပြောခဲ့သေးတာပဲ။
hi road new,
if puplic take rice,dont believe.what u eat?ur sister's home will come like that.notice....
အစိုးမရသတင်းစာကပြောတိုင်းကြိတ်မှိတ် ( ဟဲဟဲ..သဘောပေါက်မှာပါ ) ယုံတာကိုးဗျ။ ထမင်းတလုပ်အတွက်အဲဒီလောက်တောင်ခက်နေသလား မောင်လမ်းဟောင်းရာ...။ ဗမာပြည်မှာထမင်းမငတ်ပါဘူးဗျ..ခင်ဗျားတို့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဘဲတနေ့ကပြောထားတာ..” ပြည်သူ သန်းတစ်ရာအတွက်တောင်ရိက္ခာဖူလုံတယ်ဆိုတာလေ”...
It's Jack Bauer..?
For Nga Paw, (Only for Nga Paw)
ပြောစရာလဲ မလိုလောက်ပါဘူး။ ကိုယ်ဘာကောင် လည်းဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်ကို အသိဆုံးပါ။ ”အစိုးရ သတင်းစာ” အစိုးရဆိုတာလည်း တရားမ၀င် ၊ သတင်းစာဆိုတာ ကလည်း အတင်းအဖျင်းနဲ့ ပေါချာချာတွေပဲ ဖော်ပြတာပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုရဲ့ လုံခြုံရေး ကို စိတ်လေးစရာပါဗျာ။ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လို ထင်တိုင်းဖြစ်နေတာတော့ စိတ်လေးစရာပါပဲ။ သားတွေ။ သမီးတွေ မြေးတွေမြစ်တွေ ရှေ့ရေးစဉ်းစားပေးပါ။
အေးလေ နီးနီးလေးဘက်မကူးပဲ အဝေးဖက် ကူးသတဲ့..
ရေကူးကျွမ်းကြောင်း ကြွားချင်သလားပဲ ။ အော် နအဖကလဲ သိပ်တော်တယ်နော် အဲဒီနားက ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတော့ မသိလိုက် မမိလိုက်။ ရေကူးနေတာတော့ မိသတဲ့ ဟိဟိ
အစိုးရသတင်းစာကို မယုံပါဘူး။ အခု google map မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကူးမယ်ဆိုရင်လဲ မယုံပါဘူး။ ယုံပါဆိုရင် လူသိရှင်ကြား စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့လိုပါတယ်။
လူသိရှင်ကြား = နားလည်ပါတယ်နော်။
Hey Road New; no wonder u dare to say like that becoz new road constructed by SPDC is not smooth n uneven, so ugely as ur name. P...PP.
ဘယ်လိုကူးလို့ဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲမပြောတတ်ပေမဲ့ ဒီသတင်းကြားရတာ အံ့သြစရာပါပဲ။
I won't say anything unless the news improves and update.
Daw ASSk is Happy, we'll be Happy...for this...
မြေပုံထဲက တမျှော်တစ်ခေါ်ကို တွေ့မှပဲ အတွေးတစ်ခုဝင်တော့တယ်.. အင်း.. တကယ်လို့သာ စီစဉ်ချောက်ချတာမျိုးဆို ဘာလို့ အဲဒီနေရာကြီးက ကူးခိုင်းမလဲဗျာ.. ဒီလောက်ယုတ္တိ မဲ့သလိုကြီးဖြစ်နေတာကို.. ခုကြည့်.. ကိုပေါတောင် သတိထားမိတွားပီ.. ဟီးဟီး..
မောင်သတိ စောင့်ကြည့်သလောက်တော့.. အမေရိကန်ငတိကို မိတယ်.. ဒီငတိကို ဖမ်းစစ်ပီး ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး ပြင်ပနဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကို ဆွဲစိတယ်.. ဒေါ်စု နေမကောင်းဖြစ်တယ်..
ဒီနေရာမှာ မောင်သတိဟာ ဒီအဖြစ်ကို သူများတွေမြင်သလို သိက္ခာကျစရာမဟုတ်မဟတ်တွေ မမြင်ပါဘူးခင်ဗျ.. ဒီအမေရိကန် ငတိဟာ နာမည်ကြီးချင်လို့ စတန့်ထွင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်.. ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်စုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုအရ လာတွေ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်.. အဲ.. အစိုးရက အကွက်ရိုက်တယ်ဆိုတာလည်း ခုမြေပုံကြည့်ပီး နဲနဲတွေဝေသွားပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ်ပဲထားပါဗျာ..
အမေရိကန် ငတိကို မိသွားတာက စိတ်ကို သိပ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပေမဲ့ ဆရာဝန်ကို ဆွဲစိတာနဲ့၊ ဒေါ်စု ရုတ်တရက်ကြီး နေမကောင်းဖြစ်သွားတာကတော့ ကသိကအောင့်ဗျ.. ပြီးတော့ ဒီသတင်း ထွက်လာပီးမှ ထဖြစ်တာ.. လူဆိုတာက စိတ်သိပ်ပူပန်လွန်းရင် ကိုယ်ကို ထိတာပဲလေးဗျာ.. ပီးတော့ ဖျားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သွေးတိုးတယ်.. အစာမစားနိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးဆိုတော့.. အင်း.. တကယ်လို့သာ ဒီအမေရိကန်ငတိဟာ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချက်တွေကို သယ်ဆောင်ထားသူဆိုရင်တော့လဲ ဒီလိုစိတ်ပူမှုမျိုးဟာ ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်..
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ.. သူများတွေလိုပဲ မြေပုံကြည့်ပီး ကောက်ချက်ချကြည့်တာပါ.. ကဲ.. သတင်းစာထဲကအတိုင်း မေးတော့လည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ ပြန်ဖြေမယ်ဗျာ.. ဘာတဲ့ ”ဒါ့ထက်တောင် ပိုသေး” ဆိုလားပဲ.. ဟဲဟဲ..
Maybarmy SPDC is Too good that kind of thing...
Wait2days and catch this guy with all information between them discussed...
That maybmeaningful to them...
ဒါပေမယ့် အစိုးရသတင်း မှန်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့သူတွေဟာ ထင်နေတဲ့အထဲက ၉၉ ခုမှာ တခုလောက် မတော်တဆ မှားနေတယ်ထင်ရင် မှားတယ်လို့ ပြောရဲကြသလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါ။ သူများကိုပဲ လိမ်လို့ ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိမ်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှန်ဆိုတာကို မှန်တယ်ထင်လို့ မှန်တယ်လို့ ပြောနေတာကိုတော့ သူတို့ အသိဥာဏ် ဒီလောက်ပဲ ရှိလို့ ဒါကိုပဲ အမှန်ထင်နေတယ်ဆိုပြီး နားလည်လို့ ရပေမယ့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရက်နဲ့ ခေါင်းမာပြီး အမှန်လိုက်လုပ် နေသူတွေကိုတော့ နအဖဆီကဆီက လိမ်စား၊ ကပ်စားနေတဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေ အဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလူတွေကို အမုန်းမပွားကြပါနဲ့ အမုန်းပွားရင် သူတို့ အကုသိုလ်တွေကို ကိုယ်က မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေလို မျှဝေခံစားရာရောက်သွားလိမ့်မယ်။ သူတို့အကုသိုလ်ကို သူတို့ဖါသာသူတို့ ယူကြပါစေ။
U all Don't Know lah...
Wonder guessing lah..
"ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်စုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုအရ လာတွေ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်.."
I copied this poem form nay nay naing. http://naynaynaing.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
If I'm not wrong, u want to get this poem, right?
I search ur post about this poem but I don't know where is it.